अब उत्कृष्ट कर्मचारी बोनसको रुपमा रात बिताउन पोर्नस्टार दिन थालियो !
बेइजिङ्ग । चीन विश्वमा सबैंभन्दा तिव्र गतिमा आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहेको देश हो । चीनको विज्ञान प्रविधिले पश्चिमा देशहरुलाई सहजैं टक्कर दिन सक्छ । तर आज हामी यस विषयमा कुरा गर्ने छैनौं । यदि तपाई कुनैं कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने बोनसमा के दिएमने भए हुन्थ्यो भन्ने चाहानुहुन्छ ? पैंसा, गाडी, घर या अरु नैं थोक तर आज हामी तपाईलाई यो भन्दा केही फरक बोनसका बारेमा जानकारी गराउँछौं तपाई यदि वर्षको सर्वोउत्कृष्ट कामदार बन्नुभयो र तपाईले चर्चित पोर्नस्टार सँग एकरात बिताउँने अवसर पाउनु भयो भने ?
नआत्तिनुहोस, यो अफर नेपालमा होईन हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनको एक कम्पनीले ल्याएको हो । कम्पनीले त्यहाँ काम गर्ने एकजना कर्मचारीलाई जापानी पोर्नस्टारसँग एक रात बिताउन बोनस दिएको हो । कम्पनीको यो हर्कतले अहिले दुनियाँ चकित बनेको छ । यो प्राविधिक सुरक्षा कम्पनीले वर्षमा सर्वोउत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई यस्तो अफर दिएको हो ।
कर्मचारीका लागि कम्पनी आफैंले पोर्नस्टारलाई बोलाउँछ अनि रात्रि भोजको आयोजना गर्छ । शंघाईको कम्पनीमा काम गर्ने एक असल कर्मचारीलाई उनको कम्पनीले उनको कामलाई प्रसन्न तुल्यायो र उनलाई जापानको पोर्न स्टारको साथ रात बिताउने मौका दिएको हो । एजेन्सीको सहयोगमा